UJoe Abercrombie: utata wesaga Umthetho wokuQala | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | 16/08/2021 01:56 | I-Biography
Caphula nguJoe Abercrombie
UJoe Abercrombie ngumbhali waseBritane ofanelekileyo njengomnye wabayili abaphambili bohlobo lweengcinga. Ukusukela oko kwasungulwa i-trilogy yakhe La Umthetho wokuqala Kude kube ngoku kubangele isiphithiphithi esikhulu kuncwadi oluyiphupha. Enkosi ku Ilizwi lamakrele (2006) -inqaku lakhe lokuqala- wachongwa kwiminyaka emibini kamva kwiBhaso likaJohn W. Campbell loMbhali oMtsha oGqwesileyo.
Uhlobo lakhe lubonakaliswa ngokwenziwa kweempawu ezintsonkothileyo kunye nezime kakuhle, ezihambelana ngokugqibeleleyo nenyani. Malunga, Umbhali ugcina:, isakhelo ngasemva. Ke ngoko, ulwakhiwo lwehlabathi endijongileyo lujolise ngaphakathi ”.
1 Iincwadi zikaJoe Abercrombie
1.1 Umthetho wokuqala weSaga
1.1.1 Ilizwi leenkemba (2006)
1.1.2 Ngaphambi kokuba Bakuxhome (2007)
1.1.3 Ingxoxo yokugqibela yooKumkani (2008)
1.2 Eyona ntlawulo iphambili (2009)
1.3 IHeroes (ngo-2011)
1.4 Ubudala be-Saga yobudala
1.4.1 Intiyo encinci (2019)
1.4.2 Ingxaki yoxolo (2020)
1.4.3 Ubulumko bezihlwele (2021)
2 Malunga nombhali, uJoe Abercrombie
2.1 Umsebenzi kaJoe Abercrombie
Iincwadi zikaJoe Abercrombie
yomlando Umthetho wokuqala
Umthetho wokuqala luthotho lweenoveli ezintathu, ezenzeka kwilizwe elimnandi. Kula mabali I-Briton iqulethe "iphupha lakhe eliyindumasi," indlela emthathe iminyaka ukuyakha nokuphuhlisa. UAbercrombie uthi kufanele ukuba ibandakanye izinto eziphambili, ezinje:
Ilizwi lamakrele (2006)
Yincwadi yenoveli eyazisa umhlaba womlingo owenziwe ngumbhali. Oku Isekwe ikakhulu kwinkcazo-ntetho yoonobumba bayo, kokubini eziphambili nezisekondari. Ukongeza kwisiqwenga esimnandi, kuyachukunyiswa imixholo eyahlukeneyo, efana nemfazwe kunye neengxabano zopolitiko, ukungcungcuthekiswa kunye nenkohlakalo ejikeleze uBukhosi baseGurkhul; zonke zinomnwe woburharha obumnyama.
Ilizwi lamakrele: I ...
Phambi kokuba babaxhome (2007)
Esi sitolimende siyaqhubeka nebali elalinqunyanyisiwe kwingxelo yokuqala. Nakubo Umoya ombi kunye nogonyamelo lomzabalazo wokukhusela isixeko saseDagoska uyaphumelela. Abalinganiswa bayo abaphambili-uGlotka, uLogen, uBayaz, uFerro, uWest kunye noHound-, kunye namanye amalungu amatsha, benza uhambo olubalulekileyo kwaye baqhuba amadabi anzima ngokuchasene namadoda asemantla akhokelwa yiBethod.
Ngaphambi kwe ...
Ingxoxo yokugqibela yookumkani (2008)
Le yinxalenye yokugqibela thotho. Kuyo umlo oqinileyo eMantla uyaqhubeka, ngelixa IGlotka ilungiselela unyulo lokumkani omtsha. Abalinganiswa basemzabalazweni oqhubekayo ukuze baphile kwindawo enegazi kunye nobutshaba. Kule mali isiphumo sinikwe koku kungasentla kwaye iinjongo eziyinyani zabo bangenelela ukutyhubela imbali ziyatyhilwa.
Impikiswano yokugqibela ye ...
Eyona revenge (2009)
UMonza Murcatto — iNyoka yaseTalins— Ungumntu onenceba othe wonke umntu ukholelwa ukuba ufile emva kokungcatshwa emfazweni. Nangona kunjalo, yena buyela kwimpindezelo yeentshaba ezisixhenxe, kwabo angayi kuba nanceba kubo. Ukwenza oku, hamba uye kwiidolophu ezahlukeneyo eSyria (iindawo ezifana ne-Italiya yakudala ezele abathengisi kunye nabaphethe amakrele, nalapho kukho ingozi).
Kule noveli yesihlanu, uAbercrombie ubuya nemizabalazo eMantla. Ibali linenkwenkwezi Umnyama omnyama, umgcini waloo ndawo. bucala ngasekhohlo ijongene nedabi elinzima nxamnye neManyano -Iqela loMzantsi-, abafuna ukuthatha intsimi ngazo zonke iindleko. El Ubundlobongela ungquzulwano lwenzeka ngaphezulu kweentsuku ezintathu ezinegazi, eneenkcukacha ngokweenkcukacha zombhali.
yomlando Ixesha lobudenge
Le yeyona trilogy yakutshanje yeAbercrombie. Kwisicatshulwa ubuyela kwindalo yomlingo eyenziwe Umthetho wokuqala, kuphela isenzo esiya kwenzeka emva kweminyaka engama-30. Imbali imelwe yinzala ka uphawu abalinganiswa bamabali okuqala. Kwakhona, kwisiqwenga somdibaniso esinamandla nesikhohlakeleyo senzeka phakathi kweNyakatho neManyano; Nangona kunjalo, ngeli xesha umlo ungowommandla osemazantsi.
Intiyo encinci (2019)
Emva kohlaziyo lweshishini, oomatshini bathatha indawo yomsebenzi owenziwe ngesandla. Nangona le nto iqhubile e-Adua, abaninzi bayayala kwaye bahlala bethembekile kwiindlela zabo zobugqi. Ngaxeshanye, Imizabalazo ebambekayo iyaliwa phakathi kweNtla neManyano, kodwa ngezinye iinjongo. Kukho abalinganiswa abaphambili abatsha, kubandakanya: Leo dan Brock, Prince Orso, Stour Ocaso kunye Savine dan Glokta.
Intiyo encinci (Runes)
Ingxaki yoxolo (2020)
Kwisangqa seHlabathi kukho isivumelwano soxolo esibuthathaka. Kwinxalenye yayo, Ukumkani omncinci kufuneka ajongane nobunkokheli bakhe ngenkathalo, kuba wonke umntu ufuna ukusebenzisa ithuba lokungabi namava kwabo. U-Leo no-Stour Ocaso baxhalabile kwaye abawuthobisi umthetho wabo, balindele ngaphambi kweli xesha ngaphandle kokudibana. Kwaye bobabini uSavine noRikke banamaxesha abalulekileyo ebomini babo. Bonke abalinganiswa badlula kutshintsho olukhulu nolubalulekileyo.
Ingxaki yoxolo: I ...
Ubulumko bezihlwele (2021)
Yifakelo yokugqibela ye-trilogy Ixesha lobudenge; ukukhutshwa kwayo ngesiNgesi kwabhengezwa ngoSeptemba 2021. Amagqabantshintshi okuqala thaca njengengabula-zigcawu yenoveli phikisana nesiqalo sempikiswano enkulu eyayisenziwa ngaphambili. Abalinganiswa bayo abaphambili bayintloko yotshintsho lwenyani entsha, apho yonke into iyawa khona.
Malunga nombhali, uJoe Abercrombie
Umbhali uJoe Abercrombie wazalwa nge-31 kaDisemba ngo-1974 kwisixeko saseLancaster, eUnited Kingdom. Lo mfana wayefundiswe eLancaster Royal Grammar School yamakhwenkwe. Ngaloo minyaka, iBritani wabonakaliswa ngokuba nobuchule kwimidlalo yevidiyo kunye nobuchule obukhulu bokucingaIimpawu awazibonisayo ngemizobo kunye neemephu eziyintsomi.
Emva kokugqiba izifundo zakho eziziisekondari, Wabhalisa kwiYunivesithi yaseManchester, apho wafunda khona ngengqondo. Emva kokuphumelela, waya eLondon; Pha wasebenza kwindawo yemveliso yeposi kamabonakude. La mava amkhokelela ekubeni ngokuzimeleyo asebenzise ukuhlela izinto ezinokumanyelwa. Ngelo xesha wenza iiklip zevidiyo ngeColdplay, Ababulali noBarry White, phakathi kwabanye.
Ngo-2002, waqala ukubhala inoveli yakhe yokuqala emnandi, ephele kwiminyaka emibini kamva. Kwakumalunga Ilizwi lamakrele. Nangona umsebenzi wawukulungele ukumiliselwa kwakugqitywa, uAbercrombie kwafuneka alinde iminyaka emibini (2006) ukuba ipapashwe ngokusesikweni yindlu yokupapasha yaseGollanz. Ngalo mbhalo i-trilogy yaqala Umthetho wokuqala.
Ngethuba elifutshane, umbhali ufumene ingqalelo ebalulekileyo yoncwadi, Ukufikelela kwiindawo zokuqala zentengiso njengomboniso wohlobo lwefantasy.
Emva kokugqiba uthotho lokuqala, uAbercrombie wenza amabali amane azimeleyo, apho ku yima ngaphandle: Eyona revenge (2009) kunye Imihlaba ebomvu (2012). Uye wapapasha nezinye iisaga ezibalulekileyo: I-Trilogy ye Ulwandle Olwaphukileyo (2014-2015) kunye Ixesha lobudenge (2019-2021). Elokugqibela linika ukuqhubeka kwebali eliboniswe kwihlabathi eliyiphupha lesaga yokuqala.
Umsebenzi kaJoe Abercrombie
yomlando Umthetho wokuqala:
Imihlaba ebomvu (2012)
I-trilogy yoLwandle oluPhukileyo:
Isiqingatha sokumkani (2014)
Isiqingatha sehlabathi (2015)
Isiqingatha semfazwe (2015)
Iincakuba ezibulalayo (2016)
yomlando Ixesha lobudenge:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » I-Biography » UJoe abercrombie
UClara Peñalver. Udliwanondlebe nombhali we-Sublimation